Farmaajo oo Muqdisho gaarey iyo Banaanbax balaaran oo taageero ahna lagu soo dhoweeyey – idalenews.com
Ra’iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Muqdisho, oo uu hal sano ka maqnaa markii bishii June ee sanadkii hore iska casilay xilkiisa, iyadoo markii uu soo gaaray Caasimada ka hadlay ujeedada uu u yimid.
Shir jaraa’id oo uu qabtay waxaa uu ugu horeyn u mahadceliyay dadweynihii soo dhoweeyay, isagoo xusay inuu diyaar u yahay in howshii uu horay shacabka u qabanayay inuu dhameystiro.
Soo dhoweynta loo sameeyay ayaa aheyd tii u horeysay oo nooceeda aan horay loo arkin, waxaana markii uu ka soo degay diyaarada ku xoomay dadweyne fara badan oo jiiray Ilaaladii garoonka, waxaana goobta ay noqotay mid saxmad ah.
Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay dowladda inay mushaaraadka siiyaan 10-ka maalmood ee soo socota Ciidamada qalabka sida oo uu sheegay in aanay wax mushaaraad ah aysan helin muddo shan bilood ah.
“Waxaa igu maqaal ah in ciidamada qalabka sida muddo shan bilood mushaar la siin, waxaana dowladda ugu baaqayaa inay xooga saarto mushaarka inay siiso Ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda, waxay aheyd in bil walba si joogto ah loo siiyo”ayuu yiri Farmaajo.
Mr Farmaajo ayaa sheegay inay muhiim tahay in fadliga bishan Ramadaan ee 10-ka berri ee soo socota ay xooga saaraan mushaaraadka Ciidamada, si ay qoysaskooda maalinta ciida si farxad ah ula ciidaan caruurtooda.
“Waxaan halkan u imid inaan ka qeyb galo tartanka madaxtinimada oo aan ku soo biiray, oo halkan (Muqdisho) ka dhici doona 10-maalmood kadib, waxaana dooneynaa aniga iyo kooxdeyda inaan ka qeyb galo si howshii aan shalay bilownay inaan dhameystirno”ayuu yiri Farmaajo oo horay u sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya.
Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu soo saari doono waxyaabaha qorshihiisa yahay, iyo sida uu u doonayo inuu ugu qeyb galo tartanka musharaxnimada ee 20-ka bisha Agosto dhici doonto.
Dhinaca kale Banaan bax lagu soo dhoweynayay Ra’iisul Wasaarihii hore Farmaajo ayaa waxaa ka dhashay shaqaaqo, kadib markii Askar ka tirsan dowladda ay rasaas ku fureen dadkii taageerayay soo dhoweynta Farmaajo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in rasaasta ay bilaabatay markii qaar ka mid ah taageerayaasha Farmaajo uu sawirka Madaxweynaha oo qof ku sitay nawaaxiga Sayidka ka xoogeen, dabadeedna dhulka ku riday, taasoo gaari kuwa raaxada ah oo ku sugnaa goobta uu rasaas ku furay, halka Ciidamada sugayay ammaanka dadka dibad baxayay ee taageersanaa Farmaajo ay iyana rasaas fureen.
Ilaa labo ruux ayaa ku dhimatay uu mid ka mid ah uu askari ka tirsan dowladda, halka labo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana goobta kadib isku bedeshay mid kacsan, dadkuna ay kala yaaceen.
Kadib markii shaqaaqada ka dhacday goobta ayaa waxaa soo gaaray Ciidamo ka tirsan Hey’adda Nabadsugida qaranka, kuwaasoo dadka farayay inay kala tagaan oo aysan ka dhalan Fagaaraha Sayidka Amni xumo iyo iyo fowdo.
Waa markii u horeysay oo Musharax ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya, boqolaal dadweyne ay ku soo dhoweeyaan, iyagoo sawirkiisa iyo boorar ay ku taageerayeen watay, iyadoo la sheegayo in aanay ka marneyn dhaqaalo lagu bixiyay dadweynaha la isugu keenay inay soo dibad baxaan.